Waa maxay 5G? Sidee u shaqeysaa?!! – Fatuux Tech
Fatuux Cade	Uncategorized	 February 24, 2019 February 23, 2019 1 Minute
5G waxaa laga soo gaabiyay marka hore ( fifth generation) jiilka 5aad ee technology yadda. Waxey suurta galineysaa iney kor u qaado xawaaraha internet ka qaasatan Wireless ka, Waxeyna ka xawaara badisaa Wire Network ga. Sababta loo soo saaray ayaa ah in lahelo xawaare sare oo internet ah, internet lagu kalsoonaan karo shaqadiisa, hufnaanta iyo dagdag-siimaha adeegiisa iwm.
Maadama ay sii noqoneyso dunida mid ku shaqeysa Internet of Things (IoT) waxaa baahideyda imaaday in la helo ama la hormariyo xawaaraha iyo hufunaanta adeega internet ka. Sida aan ka war qabno waxaa Jiro qalabyo guriga ladhigo, xafiiyada, gawaarida, mobiles ka oo kuwada shaqeeyo Internet ka. Haddaba 5G waxey soo dabooshay baahida intaas oo qalab ah IoT.
Sidee u shaqeysaa haddaba 5G?!!!..
Wireless ka waa unugyo yar yar isku tagay kadibna lagu diray radio waves ka. 4G Long-Term Evolution(LTE) waxey hordhac u ahaayeen 5G network gaan. Waxey isticmaali jireen tower yo dhaadheer, xoog badan, sidoo kalena koronto cunis badan. Balse 5G waxuu kaliya u baahan yahay tower yar sidoo kalena koronto aad u yar. Waxaana ladhigi karaa saqaf yada guryaha iyo sidoo kale baalayaasha leerka. Waxuuna dirayaa warbixinno fara badan asagoo kaliya isticmaalaya intaas.
Jiilashi hore ee wireless ka waxey badanaa la kulmi jireen frequency yar markey timaado masaafada iyo dhax galka( interference). 5G jiilkaan ayaa baahidaas daboolay asagoo u sameeyay qalabyo yar yar la dhigi karo meelo isku dhow dhow si loo helo high-frequency oo loogu diro fariimaha ama xogta. Sidey doonto ha noqote, dunida ayaa hadda u guureyso 5G.
Waxaan filayaa inaad fikrad buuxda ka heshay 5G iyo siduu u shaqeeyo. wixii fikrad ah fadlan comment ga iigu soo qor. Mahadsaid.
Previous Post Maxuu yahay Internetka Madow(Dark Web)!! Sidee loo isticmaalaa!!
Next Post Waa maxay Internet of Things(IoT)!!
2 thoughts on “Waa maxay 5G? Sidee u shaqeysaa?!!”
Hanad Abdillahi Khaleef says:
Waxaa aad iyo aad ugu faraxsanhay kuuguna hambalyeena shaqadda aad heesid iyo sida aad u dabooshay baahida aan ka qabnay adeega 5G oo aan maanta ahay qod wax bdn ka og. Thnks wll Fatux.
Mahadsanid walal hanad. Dhiira galintiina wax weyn ayee ii tahay.